Tsy fahamatoran’ireo kandidà sy mpanao politika: notebahin’Andrianainarivelo Hajo ireo mitsipaka ny fifidianana | NewsMada
Tsy fahamatoran’ireo kandidà sy mpanao politika: notebahin’Andrianainarivelo Hajo ireo mitsipaka ny fifidianana
Nahitsy ary tsy nitsitsy fitenenana manoloana ireo kandidà sy mpanao politika sasany. «Mamono ny firenena ireo mieritreritra ny tsy hisian’ ny fifidianana », hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, tamin’ny resaka nifanaovana taminy. Nanteriny fa miray feo amin’ireo rehetra efa nanao fanambarana amin’ny tokony hirosoana amin’ny fifidianana, araka ny voalazan’ny lalàna, ny tenany ka tsy misy antony tokony tsy hanatanterahana izany intsony.
Tsy tokony hifampatahotra eto izany…
Nadikan’ny mpanorina ny antoko Malagasy miara-miainga ho tsy manana fahavononana ny fihetsik’izy ireo ary tahaka ny zazakely. “Tokony hanentana ny olom-pirenena handray anjara amin’ny fifidianana amin’ny maha kandidà azy izy ireo nefa lasa vato misakana izany indray”, hoy ihany izy. Notsindriny fa tokony hitady vahaolana hipetrahan’ny filaminana sy fitoniana eto amin’ny firenena izy ireo. “Aoka tsy hanao fampitahorana na fandrangitana. Tokony hitondra fitoniana sy vahaolana hametrahana fitoniana ireo mpanao mpanao politika sy kandidà tsy mankasitraka ny hanaovana fifidianana. Hitondra firenena nefa manao izany ? Eto amintsika, misy karazan’olona tsy mankasitraka ny hisian’ny fifidianana. Rehefa tonga koa anefa ny Tetezamita, mimenomenona fa tsy mety izany. Rehefa iza àry no mitondra ny Tetezamita ka mety, rehefa iza kosa no tsy mety ? », hoy hatrany Andrianainarivelo Hajo.
Vahaolana ny firosoana amin’ny fifidianana
Karazan’ny valin-kafatra ho an’ireo mpanao politika sy kandidà tsy manaiky hanatanterahana ny fifidianana izany. Nokianin’izy ireo ny tetiandro hanatanterahana ny fifidianana. Tao ireo nametraka fitoriana mihitsy. Nisy koa ireo nandrangaranga fa hiseho ny korontana na koa miketrika fidinana an-dalambe. Etsy andaniny anefa, nanao ranolava ny fanehoan-kevitry ny olom-boafidy, ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa anisan’ny vahaolana manoloana izao savorovoro izao ny fifidianana.